Kumuka: Inonakidza webhusaiti uye kufamba kwe Mahara Software | Kubva kuLinux
Kumuka: Iyo inonakidza webhusaiti uye kufamba kweMahara Software
Nguva nenguva, kuwedzera ku nhau kana zvidzidzo pamusoro pekushandisa, mitambo uye masisitimu, isu tinowanzo kuongorora mawebhusaiti anobatsira uye anonakidza ayo anowanzo kupa mahara uye anowanikwa masevhisi, uye izvo zvinoshingairira kubatsira ku Yemahara Software kufamba. Ndokusaka nhasi, chinyorwa ichi chakakumikidzwa kune webhusaiti inonzi "Simuka".
"Simuka" parizvino iri webhusaiti inopa zvishandiso zvekutaurirana pamhepo yevanhu nemapoka anoshanda mu libertarian shanduko yemagariro. Uye zvakare, iwo chirongwa chakanangidzirwa gadzira dzimwe nzira dzegutsaruzhinji y ita wega-manejimendi nekudzora yavo midhiya.
NoGAFAM: Inonakidza webhusaiti uye kufamba kweMahara Software
Tisati tapinda mumusoro we "Simuka", zvakakosha kuziva kuti, pakati pevamwe mawebhusaiti kana epuratifomu epamhepo inonakidza kuve ye yemahara software nharaunda kana kufamba, isu takatomboongorora vamwe vamwe kumberi zvinyorwa zvakabatana. Naizvozvo, isu tinobva tasiya zvinongedzo zvinotevera pazasi, kuti kana zvichidikanwa vagone kuongororwa mushure mekupedza kuverenga bhuku iri:
"NOGAFAM: Inzvimbo iyo suye akaita kusimudza chibhakera chake mumhepo!, kupedza hutongi hwehunyanzvi hwevashoma, uye kutsigira vanhu nemakambani emuno kuti vadzokerezve pamusoro pe data ravanogadzira, kupa mhinduro zhinji uye dzimwe nzira dzeSevhisi / Software kuti zvive nyore uye hupenyu hwakawanda, hwemagariro pamwe nehupfumi." NoGAFAM: Inonakidza webhusaiti uye kufamba kweMahara Software
SUChat: Veruzhinji vanoisa ipapo meseji yekutumira mameseji
ZvekuvanzikaTools: Inokosha uye inobatsira webhusaiti yepamhepo zvakavanzika
Disroot: Yemahara, yakavanzika uye yakachengeteka chikuva chepamhepo masevhisi
1 Kumuka: Mahara Software Kufambisa
1.1 Chii chinonzi kusimuka?
1.2 Mupiro kune Mahara Software
Kumuka: Mahara Software Kufambisa
Chii chinonzi kusimuka?
Maererano ne zviri pamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uye kufamba / pamwe chete, inorondedzerwa se:
"Iyo webhusaiti iyo inotsvaga kupa pamhepo kutaurirana maturusi kuvanhu uye mapoka anoshandira libertarian yemagariro shanduko. Chirongwa chekugadzira dzimwe nzira dzegutsaruzhinji uye kushandisa kuzvidzora-kutonga nekudzora edu enhau. Chinangwa chesangano redu kusikwa kwenzanga yakasununguka yakarongedzwa pasi pemisimboti inotevera: Democracy, Kuenzana, Kusiyana, Chengetedzo, Kugadzira, Kuzvisarudzira, Kuzvimiririra, Ruramisiro, Runyararo, Ecology neEconomy."
Uye zvakare, yavo maintainers Ivo vanowedzera kuti:
"Riseup inoshanda isinganeti kugadzira michina yepasi inotarisana nezvinodiwa zvekutaurirana zvevanhu nemasangano anoshandira shanduko yemagariro. Paunogamuchira sevhisi kubva kukambani isingakubhadharise, zvinowanzoitika kuti ivo vanowana mari yekukutarisa zvakanyanya. Kumuka, kune rimwe divi, zvinoenderana nezvipo zvevashandisi vayo, vanokufarira, vanotenda mukuchengetedza dzimwe nzira dzedemokrasi."
Mupiro kune Mahara Software
"Simuka" anotsanangura kuti kuburikidza nerabhoritari yake, "Riseup Labs", zvinoshingairira kubatsira Yemahara Software kufamba. Sezvo, inozvitora sechikamu chedhijitari yakajairika yakanaka yekushandisa kwedu tese.
Mipiro yakaitwa kune Yemahara Software inosanganisira zvinotevera:
Chengetedzo uye zvakavanzika zvigamba: Kusanganisira yavo vhezheni dzekugura masisitimu, kutumira tsamba, webmail, uye anozivikanwa webhu ekushandisa maturusi.
crabgrass: Yakavhurika sosi yewebhu kunyorera yakagadzirirwa kushamwaridzana, kubatana kweboka uye rakarongeka sangano. Chinangwa chedu ndechekugadzira maturusi ekutaurisa akanyatsogadzirirwa kusangana nezvinodiwa musangano wekutanga.
backupninja: Seti yakakurumbira yezvishandiso iyo inopa nzira yepakati yekumisikidza uye kuronga dzakasiyana siyana dzekuchengetedza zvinhu.
monkeysphere: Chishandiso che software chinobvumidza kushandisa iyo OpenPGP webhu yekuvimba kuongorora ssh kubatana. Uye zvakare, inzvimbo inoshandisa iyo OpenPGP webhu yekuvimba kuita PKI mabasa.
Puppet: Kugadzirwa kwemamojuru akasiyana ePuti, inova ine simba rekugadzirisa manejimendi yakanyorwa muRuby, muchinjika-chikuva uye yakavhurika.
debian grimoire: Kugadzirwa kwematanho-nhanho-ezvidzidzo zvakatumirwa pawebhusaiti yako, nechinangwa chekubatsira mamwe masangano kurwisa neyakavhurika sosi yehunyanzvi matekinoroji, kunyanya mukufamba kwakadzika uye nekuita kwakananga.
Debian GNU / Linux: Nhengo dzinoverengeka dzeRiseup pamwe chete vashanduri vanoshingaira veDebian (iro chete rakakura rekuparadzira rakagadzirwa kwete purofiti).
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve yako mapurojekiti, masevhisi uye zvipo ku Mahara Software shanyira zvinotevera link. Uye yeuka kuvatsigira nekuvaparadzira uye kupa, kuitira kuti vagone kuenderera mberi vachipa vachitsigira Mahara Software, Vhura Chinyorwa uye GNU / Linux.
Uye pakupedzisira tinokukurudzira kuti uongorore bhuku rekupedzisira rapfuura rinonzi «Kugovera iyo Internet: Yakagadzwa Networks uye Autonomous Servers»Kwatakange tambotaura "Simuka" nemamwe mapurojekiti akafanana, maererano ne Autonomous kana inozvimiririra-inochengetwa maseva.
Muchidimbu, "Simuka" Ndicho inonakidza, inobatsira uye imwe webhusaiti kuve nekukweretesa yakanakisa huwandu hwe mahara uye anowanikwa masevhisi, uye izvo zvakare zvinoshingaira zvinopa kune Free Software kufamba. Uye saka, inogona kutarisirwa seyakanakisa webhusaiti, kunyanya kune avo vedu vanotsigira Mahara Software, Vhura Sosi uye GNU / Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Kumuka: Iyo inonakidza webhusaiti uye kufamba kweMahara Software
Cryptogames: Inobatsira mitambo kubva kuDeFi nyika kuziva, kutamba uye kuhwina